Wefti ka Kooban Salaadiin iyo Guddiga Beesha Sacad Muuse oo Berbera u Tagay Muranka Dhismaha Warshadda Sibidhka | Berberanews.com
Home WARARKA Wefti ka Kooban Salaadiin iyo Guddiga Beesha Sacad Muuse oo Berbera u...
Wefti ka Kooban Salaadiin iyo Guddiga Beesha Sacad Muuse oo Berbera u Tagay Muranka Dhismaha Warshadda Sibidhka
Berbera (Berberanews)- Wefti culus oo ka kooban salaadiin, culimaa’udiin iyo guddiga beesha Sacad Muuse, ayaa socdaal la xidhiidha muran ka taagan hirgelinta warshadda Sibidhka Berbera maanta ku soo gaadhay magaalada Berbera .
Weftigaasi oo ay xubno ka yihiin afar suldaan iyo guddiga beesha Sacad Muuse guddoominayo Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac, kaas si weyn loogu soo dhaweeyey Berbera, kadib markii dadweyne badani iyo gaadiid ay wataan kaga hortageen meel ka baxsan magaalada, isla markaana markii dambe ku wareejiyey jidadka iyo suuqyada, waxa ujeedadoodu la xidhiidhaa inay u kuurgalaan muranka warshadda ee taagan oo ka dhashay ruqsad dhawaan shirkadda Dahabshiil loo siiyey hirgelinteeda, iyadoo horena ay u jirtay mid Madaxweynihii hore Daahir Rayaale u siiyey ganacsato reer Berbera ah.
Xaflad weftiga loogu qabtay guriga Guddiga beesha Ciise Muuse ee lagu doortay shirkii degaanka Dubur ee Dan iyo Duco, ayaa lagaga hadlay soo dhaweynta loo sameeyey iyo ujeedada weftiga reer Hargeysa u tageen Berbera.
Saleebaan Jaamac (Saleebaan Mijir) oo ku hadlayey afka Guddiga beesha Ciise Muuse, ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin imaatinka weftigaasi oo uu sheegay inay yihiin walaalahood oo u yimi, isla markaana ay soo dhaweynayaan cid kasta oo walaaltinimo ula timaada.
Isagoo arrintaa ka hadlayeyna waxa uu yidhi, “Cid kasta oo walaalnimo, tolnimo iyo waxgaradnimo noogu timaada diyaar baanu u nahay. Idinkuna hawlaha jira ee magaalada ka socda waad ogtihiin oo waa waxaad u timaadeen, Ilaahayna waxaan ka baryayaa in waxaa socdaa si wanaagsan u dhammaadaan oo aanay dhibaato iyo xumaan midna inoo keenin, idinkuna wixii cilmiga iyo caqli ah aad u leedihiin arrintaa nagu kordhisaan.”
Xaaji Muuse Xirsi Abokor (Muuse-dalab) oo hadal kooban ka jeediyey xafladaasi, “Aad baanu ugu faraxsanahay imaantinkiina, waanu idin soo dhawaynaynaa, waxaad nala qabataana taariikhdaa qori doonta,” ayuu yidhi Xaaji Muuse.
Guddoomiyaha weftiga Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac, ayaa tafaasiil ka bixiyey ujeedada socodkooda, waxaannu yidhi, “Waxaannu u nimi in aannu idiin gargaarno, waayo Nebigeenu (SCW) waxa uu yidhi, ‘u gargaar walaalkaa haddii uu dulmi wado iyo haddii la dulmiyayaba.’ waxa lagu yidhi ‘garanay haddii uu dulmi wado ee haddii la dulmiyayo side ayaanu ugu gargaarnaa? wuxuu yidhi ‘waa in aad gacanta qabato.’ Markaa gargaarka aannu idiinku nimi waa sidaas. War laftiisana odayaasha ayaanu is-warsi iyo wadafadhi la yeelan doonaa.”
Suldaan Xiis Barre Yuusuf oo ka mid ah weftiga Hargeysa ka tagay, ayaa uga mahadnaqay odayaasha iyo dadka reer Berbera ee soo dhaweeyey, “Maadaama aad xigtadayadii tihiin, dhaqdhaqaaqna jiro in aannu idiin nimaadnaa waa mid muqadas ah oo waajib nagu ah oo aanaan cidna ka maragsanayn. Waxaannu idiinku ducaynaynaa towfiiq, heshiis iyo walaaltinimo dhammaanba reer Berbera, Somaliland oo dhan Ilaahay walaalo is jecel oo wax isu quudha oo wax kala qaata ha inaga dhigo. Waxa kale oo aannu idiinku bushaaraynaynaa ilaa halka idin xannuunaysa ee aannu idiinku soo gurmanay dawayno idinkama tagayno, Ilaahayna waanu la kaashaynaynaa,” ayuu yidhi Xiis Barre.
Waxa kale oo xafladaasi ka hadlay Suldaan Ismaaciil Sul. Cabdiraxmaan, Suldaan Jaamac Cismaan Aadan iyo Suldaan Maxamuud Siciid Maxamed oo dhammaantood ka mid ah weftiga Berbera tagay, ayaa isku raacay in ay Berbera u yimaadeen muranka ka taagan dhismaha warshadda Sibidhka oo ay doonayaan kulamo xogogaal ugu noqdaan xaaladda jirta, isla markaana ay ka hawlgeli doonaan sidii loo xallin lahaa.
Previous articleSomaliland iyo Xuska Maalinta Haweenka Caalamka ee 8-da March
Next articleWasiir iska casilay dawladda Syria iyo Kofi Anan oo ka digay tallaabo Milateri